Ciidammada Dawladda oo sheegay in 2 horjooge ay ka dileen Al-shaab | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ciidammada Dawladda oo sheegay in 2 horjooge ay ka dileen Al-shaab
Ciidammada Dawladda oo sheegay in 2 horjooge ay ka dileen Al-shaab
War ay daabacday wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA, ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladdu ay laba sarkaal ka dileen dagaalyahannada Al-shabaab.
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ay ka fuliyeen gobolka Bay waxaa ay ku khaarijiyeen horjooge sare oo ka tirsanaa maleeshiyada Alshabaab,kaasi oo u qaabilsanaa dhibaataynta shacabka ku dhaqan magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale ee gobolkaasi.
Howlgalka oo ka dhacay meel khayaas ahaantii 45 KM dhanka Galbeed kaga beegan magaalada Baydhabo ayaa lagu dilay horjooge Ibraahim Macalin Cabdi,kaasi oo magaciisa is afgarashada Alshabaab lagu sheegay(Ibraahim Geney).
Ciidanka ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 2 qori nuuca AK47 ah iyo Baaskoolada leh 8 qasnadood,sida uu ku soo waramay wakiilka warbaahinta Qaranka ee gobolka Bay Siraaji SHeekh Isxaaq.
Dhanka kale howlgal qorshaysnaa oo ay ciidanka kumaandooska Danab ay ka sameeyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayay ku khaarijiyeen horjoogihii maleeshiyaadka Al-shabaab uqaabilsanaa diyaarinta qaraxyada iyo afar maleeshiyaad,kuwaasi oo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaalo degmada Jamaame,halkaasi oo ay ciidanka kumaandooska ay ku soo qabteen.
saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in Horjoogahani oo lagu magacaabo Aadan Yuusuf Sheekh Maxamuud (Abuu Salmaan) uu dhibaatooyin badan ugeystay shacabka ku dhaqan gobolada Jubooyinka,balse ciidanka kumaandooska ayaa ku guuleystay in ay toogtaan.
Tan ayaa qeyb ka ah bartilmaameedka goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyada Alshabaab,taasi oo ay wadaan ciidanka Xooga Dalka.
Akhri 5 qodob, oo Deni iyo Madoobe ay diidanyihiin iyo shirkii oo maalintii labaad galay
DHUUSA-MAREEB : Nin muruq-maal ah oo tooray lagu dhaawacay iyo Police-ka oo ka hadlay.
Madaxweyne Farmaajo, oo khudbad daqiiqad ka yar u jeediyay golaha shacabka.